News - In | kuhwina goridhe Wright "total quality management (TQM) yehondo chaiyo" kudzidziswa kwakakosha
Kuti unyatsonatsiridza hunhu hwekutarisira hunhu, ruzivo rwehunyanzvi uye hunyanzvi hwevashandi vekambani, simbisa kutonga kwechigadzirwa uye kugona kwekumira kwebhizinesi rega rega. Kubva munaGunyana 11 kusvika 12, 2021, mudzidzisi Xu Xingtao, nyanzvi yekugadzira manejimendi, achakokwa kubata 2-day TQM yekudzidziswa muKinwright Training Center. Vanhu vanodarika zana vakapinda mukudzidziswa uku, kusanganisira mutungamiriri wekambani-chikamu uye pamusoro pevashandi uye r&d, kugadzira nevashandi vane hukama.
Kuti uvandudze maitiro ekudzidziswa, vandudza kutora chikamu kwevashandi kudzidza uye kufarira. Kudzidziswa kunotora iyo chaiyo yekurwisa boka PK modhi, uye inobatanidza iyo scoring system mukudzidziswa. Vadzidzisi vakakamurwa kuva mapoka gumi nemaviri. Boka rega rega rinogadza zita rechikwata, rinogadzira LOGO uye sirogani.
Izvo zvakanyanya zvemukati zvekudzidziswa uku zvinosanganisira TQM manejimendi (mhando-yakatarisana), TQM kuzadziswa mubhizinesi, uye TQM kuita maitiro.
Chinhu chakakosha cheuzivi hwekugadzira kudzikisa mitengo, kupfupisa kutenderera kwekugadzira uye kuvandudza mhando nekubvisa zvisiri-kukosha-akawedzera zviitiko mune ese maficha ebhizinesi. Akagovera misimboti misere yeTQM uye nzira nomwe dzeQC, akaongorora zvikonzero uye akawana matanho akabatana nemamiriro chaiwo eKinwright, uye akarovera pa-saiti uye kushandisa mamwe maturusi, kuitira kuti vadzidzi vagone kuyeuka zvakadzama uye kunyatsoshandisa izvo. vakadzidza.
Imwezve kuedza, imwezve mhedzisiro. Kudzidziswa uku kunobatanidza zvinodyidzana zvinongedzo sekupindura mibvunzo nemitambo, uye kudzidzisa vadzidzi kuti vakwane, kubatana uye kushandira pamwe pamwe chete. Isu tinoshingairira kukurukura nezve chiitiko, vachisimudza maoko avo kuti vataure mapoinzi, nechido chikuru.
Pakupera kwekudzidziswa, zvibodzwa zveboka rega rega zvichaverengwa zvichienderana nemamiriro ekudzidza. Boka rine zvibodzwa zvepamusoro-soro richapihwa chitupa cherukudzo nemibairo, uye vese vanenge vakunda vachapihwa mapoinzi eA20.
Hunhu ndiyo hwaro hwekupona kwebhizinesi uye kusimukira, chiratidzo chekutonga kwemhando: kugutsikana kwevatengi kwakanyanya, mutengo wakaderera wemhando. Mune ramangwana, kambani ichagadzira nhevedzano yezviyero zvekuvandudza zvinoenderana nezvinangwa zviviri izvi, kuvandudza ruzivo rwemhando uye hunyanzvi hwevashandi vese, kupa rutsigiro rwakasimba rwekuvandudza kunaka kwekambani, uye kugadzira ramangwana rekukunda-kuhwina kweJinpin.